Britain: Wasiir kale oo toddobaad gudihiisa lumin doona xilkiisii – Kasmo Newspaper
Britain: Wasiir kale oo toddobaad gudihiisa lumin doona xilkiisii
Updated - November 8, 2017 12:45 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Theresa May ayaa ku dhow in ay lumiso xubin kale, ka dib istiqaaladdii Wasiirkii Gaashaandhigga, Michael Fallon oo ku lug yeeshay fadeexadda la baxday “Faraxumaynta Westminister” ee maalmahaan socota.
Markaan waxaa in ay xilkeeda lumiso laga yaabaa Priti Patel, Wasiirkii Iskaashiga Caalamiga, sababta kulammo aan loo fasixin oo ay la yeelatay siyaasiyiin Israeli ah oo uu ku jiro R/Wasaaraha Benjamin Netanyahu.
Haweenaydan Xisbiga Muxaafidka ka tirsan waxay bishii Agosto qoyskeeda kula qaadanaysay dalka Israel fasax, markii ay kulammo qarsoodi ah la yeelatay mas’uuliin Israeli ah iyada oo aan soo wargalin London.
Waxaa sidoo kale la sheegay in ay bishii ku xigtay ku kacday, mar labaad, dhaqaankaas oo kale ee loo yaqaanno “ Dibolomaasiyadda qaraabashada” iyada oo jabisay anshixii Wasiirnimada.
Cududaar ay ka bixisay arrimahaas ayaa noqon waayay qaar ku filan, waxaana hadda, iyada oo ku sugan Uganda, loogu yeeray in ay si degdeg ah ku soo gasho dalka.
BBC-da ayaa warinaysa, in R/Wasaare Theresa May oo la tacaalaysa kala qaybsanaanta gudaha Xisbiga iyo af-lulatada Dibolomaasiyadeed ee Boris Johnson, ayan middaan oo kale ka qarsan karin indhaha.